«Athletisme pour tous»: hifaninanana koa ny «défi du lac» | NewsMada
«Athletisme pour tous»: hifaninanana koa ny «défi du lac»
Hanokatra ny taom-pilalaovany ny federasiona malagasin’ny atletisma (FMA). Hanombohany izany ny “Atletisma ho an’ny rehetra” na ny “Athletisme pour tous”. Hisy ny zava-baovao, ao anatin’izany hazakazaka izany.
Hotanterahina ny alahady 26 janoary ny hazakazaka “Atletisma ho an’ny rehetra”. Hetsika karakarain’ny federasiona malagasin’ny atletisma (FMA) ary hanokafany ny taom-pilalaovana 2020. Toy ny mahazatra, etsy amin’ny farihin’Anosy ny hanatontosana izany. Amin’ity, iarahana amin’ny Eau Vive izany ary tohanan’ny Telma sy ny Homeopharma ary ny kaominina Antananarivo Renivohitra.
Nambaran’Andriamahazo Norolalao, filohan’ny federasiona, tamin’ny fihaonany tamin’ny mpanao gazety, tetsy Alarobia omaly talata, fa tsy fifaninanana akory izy io fa ho fanentanana ny olona ho tia atletisma ary hahatsapan’izy ireo fa fahasalamana ho an’ny daholobe ny mihazakazaka.
Hihodina indroa ny farihin’Anosy ireo mpandray anjara rehetra. Ankoatra izay, zava-baovao amin’ity andiany 2020 ity ny fisian’ny “défi du lac”. Fifaninanana natao ho an’ireo olona tsy manana kara-pilalaovana izy io ka mihodidina ny farihy mandritra ny 30 mn. Izay tian’izy ireo na hihazakazaka na mandeha an-tongotra fotsiny. Hivoaka ho mpandresy izay mahavita fihodidinana be indrindra mandritra io fe-potoana io.
Ankoatra izay, tsy miova ny ho endriky ny “Athletisme pour tous” fa hisy hatrany ny fifaninanana hazakazaka mifampitohy, ho an’ny sekoly, ka ireo ankizy 14 ka hatramin’ny 16 taona, lahy sy vavy, no hifaninana amin’io.
Hahazo loka ireo telo voalohany, eo amin’ireo sokajy roa ireo. Hahazo fankasitrahana ihany koa ireo orinasa mahasarika olona betsaka indrindra hihazakazaka, amin’ity.